Sideen u saxiixi karaa?
Dalbashada koontada NEO way fududahay oo meel fog baa lagu samayn karaa.
Si aad u bilowdo hawsha arjiga, guji “Fur akoon shaqsiyeed” una sii gudub foomka dalabka. Kadib soo gudbinta foomka dalabka, kiiskaaga wuxuu mari doonaa dib u eegista u hogaansamida.
Talaabadani waxay qaadan kartaa ilaa 7-10 maalmood oo ganacsi. Xaaladaha qaarkood, waxaan kaa codsan karnaa inaad na siiso macluumaad dheeri ah si aad wax walba ugu dhammaystirto si waafaqsan shuruudaha maamulkeena.
Fadlan la soco in ka dib marka dukumiintiyadaada la hubiyo isla markaana koontadaada la furo, waxaad ka heli doontaa emayl ka socda NEO oo leh isku xidhka ereyga sirta ah.
Xidhiidhku wuxuu shaqeynayaa 24 saac ka dib marka uu dhaco, waa inaad codsataa mid cusub adigoo la xiriiraya kooxdayada Taageerada Macaamiisha bancaneo@protonmail.ch
Kadib markii lambarkaaga sirta ah la dejiyo, fadlan u gudub Google Play ama AppleStore si aad u soo dejiso barnaamijkeenna.
Marxaladda ugu dambeysa ee hawsha furitaanka koontada ayaa ku xaqiijineysa aqoonsigaaga barnaamijkeenna moobiilka.
Telefoonkaaga casriga ahi waa inuu leeyahay kamarad hore. Fadlan sidoo kale diyaarso baasaboorkaaga ama aqoonsi qaran.
Waa maxay xaqiijinta aqoonsigu?
Waa nidaam xaqiijin aqoonsi oo ay ku shaqeeyso lamaanaheena Onfido, oo lagu sameeyo wicitaan fiidiyoow hal mar ah.
Sideen ku buuxiyaa wicitaanka aqoonsiga fiidiyowga?
Saaxiibkeen Onfido wuxuu soosaaray hab aamin ah, amaan ah oo kufiican oo lagu xaqiijin karo aqoonsiga dhijitaalka ah waqtiga-dhabta ah, meelkasta oo aduunka ah.
Si aad u bilowdo hawsha xaqiijinta aqoonsigaaga hal mar, fadlan ka soo gal barnaamijkaaga moobiilka ee NEO taleefankaaga casriga ah, adoo isticmaalaya cinwaanka emailkaaga iyo lambarkaaga sirta ah.
Inta lagu jiro wicitaanka fiidiyowga waxaad ka qaadi doontaa sawirro baasaboorkaaga ama aqoonsigaaga waddaniga ah, sameyso sawir gacmeed, waxaad madaxaaga u dhaqaajin doontaa midigta iyo bidix oo waxaad ku dhawaaqeysaa lambarro dhowr ah, oo nidaamku ku siin doono. Ma qaadan doonto wax ka badan hal daqiiqo oo waqtigaaga ah.
Waa kuwan talooyin kooban oo ku saabsan sida aad isugu diyaariso wicitaanka fiidiyowga:
Hubso inaad ku sugan tahay meel xasilloon oo leh xiriir internet oo xoog leh iyo iftiin dabiici ah oo wanaagsan.
Xulo dalkaaga dhalashada, hubi nooca dukumiintiga aad adeegsan karto oo diyaar u noqo.
Muhiim: waxaad ku dhaafi kartaa xaqiijinta aqoonsi qaran ama baasaboor haddii aad tahay degane yurub iyo baasaboor KELIYA haddii aad tahay qof aan u dhalan EU.
Muxuu wicitaanka xaqiijinta aqoonsiga fiidiyowgu muhiim u yahay?
NEO oo leh Satchel waxay leedahay shati ay soo saartay Waaxda Adeegga Kormeerka ee Bangiga Qaranka ee Lithuania waxaana la siiyay shatiga hay'adda lacagta elektiroonigga ah Nr. 28, oo leh nidaamka lacag bixinta nambarka kaqeybgalaha Nr. 30600, oo wuxuu ganacsi ku qabtaa sharciyada Jamhuuriyadda Lithuania, sida ku cad Amarka EU (2009/110 / EC) iyo EU Directive (2015/2366) ee ku saabsan adeegyada lacag bixinta ee EU-da oo dhan.
Waxaa si sharci ah nalooga baahan yahay inaan xaqiijino aqoonsigaaga ka hor intaanan kuu furin akoon Satchel ah.
Nidaamka xaqiijinta aqoonsiga ee wicitaanka fiidiyowgu waa mid sharci ku dhisan oo waafaqsan nidaamka aqoonsiga fog, oo loogu talagalay inuu u hoggaansamo qawaaniinta iyo sharciyada bangiyada ee ugu dambeeyay, iyo sidoo kale Sharciga La Dagaalanka Lacagta La Dhaqay (AML)
NEO Koontada hada
Halkee laga heli karaa koontada ganacsiga NEO?
NEO ee Ganacsiga ayaa hadda loo heli karaa shirkadaha ka diiwaangashan oo ku leh joogitaan jireed Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA) ama Switzerland.
Tan waxaa ka mid ah wadamada soo socda:
Maxaan sameyn karaa haddii dalkayga aan weli la taageerin?
Waxaan kudaridoonaa arjigaaga liiskayaga sugida mudnaanta waana kusheegi doonaa isla marka adeegyadayada laga helo wadankaaga.
Sideen ufuri karaa koonto?
Waxaad si fudud u furi kartaa a shakhsiyeed or ganacsi koontada adoo soo gudbinaya foomka furitaanka xisaabta Shakhsi / Ganacsi, oo aad ka heli karto websaydhkayaga.
Ka dib marka foomka la gudbiyo, waxay qaadan kartaa 7-10 maalmood oo shaqo ah si loo dhammaystiro jeegagga u hoggaansamida oo loo furo koontadaada.
Waa maxay dukumiintiyada loo baahan yahay si loo furo xisaab shaqsi ama ganacsi?
Waxaad ka heli kartaa liiska dukumiintiyada loo baahan yahay degelkeenna:
Dukumiintiyada loo dejiyay shakhsiyaadka: Riix halkan
Dukumiintiyada loo dejiyay ganacsiyada: Riix halkan
Waa maxay shuruudaha loo diyaariyey milkiilayaasha faa'iidada leh iyo agaasimayaasha shirkad?
Si loo furo xisaab ganacsi NEO, waxaan u baahanahay inaan xaqiijino faahfaahinta agaasimayaasha iyo saamileyda koowaad ee shirkaddaada.
Nidaamkani wuxuu waafaqsan yahay nidaamka xakamaynta "Ogow Macaamiilkaaga" (KYC), kaas oo ka caawiya ganacsiyada inay xaqiijiyaan aqoonsiga macaamiishooda.
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso faahfaahinta shakhsiyaadka iska leh in ka badan 25% saamiyada guud ee ganacsigaaga.
Saamilaydan iyo agaasimayaashani waxay u baahan doonaan inay soo bandhigaan sawir tayo sare leh oo ah aqoonsi rasmi ah, kaas oo shaqeynaya ugu yaraan saddexda bilood ee soo socota. Waad ku martiqaadi kartaa inay soo gudbiyaan jeeggooda aqoonsiga si iskeed ah ama u soo rar dukumintiyada iyaga ayaga oo matalaya.
Fadlan ogow inaan weydiisan karno dukumiinti dheeri ah.
Xisaabaad noocee ah ayaan bixinaa?
Koontadaada sayidka waxaa laga furaa EUR, waxay la timaaddaa IBAN iyo BIC gaar ah, waxaana loogu talagalay lacagaha SEPA oo keliya.
Waxaa suurtagal ah in la furo akoonno dheeri ah oo loogu talagalay wareejinta caalamiga ah ee lacagaha kala duwan iyada oo loo marayo IBAN la wadaago.
Si aad uga dalbato akoonnada lacagaha kale, fadlan soo gudbi foomka dalabka SWIFT, waxaanan kugula soo noqon doonnaa adiga xalka ugu habboon ee baahiyahaaga bangiga.
Foomka dalabka SWIFT
Haa, waxaad si fudud uga heli kartaa NEO akoon ahaan adoo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah adigoo soo degsanaya barnaamijkeena bangiyada moobaylka (Satchel ee macruufka iyo Android)
Waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijka halkan:
Waa maxay IBAN?
Lambarka Xisaabaadka Bangiga Caalamiga (IBAN) waa nambarka caadiga ah ee lagu aqoonsado xisaabaadka bangiyada caalamiga ee ka gudbaya xuduudaha qaranka.
IBAN yurubiyan ah wuxuu kakoobanyahay ugu badnaan 27 xarfood oo xarfo xaraf ah.
Ganacsi kasta ama koontada NEO shaqsiyadeed waxay leedahay IBAN u gaar ah oo loo xilsaaray.
Xagee ka heli karaa IBAN?
Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta koontadaada adoo qaadaya tallaabooyinka soo socda:
Xafiiska Macaamiisha Webka ee NEO
Saxeex ku qor koontadaada NEO oo aad tagtaa "Xisaabaadka" menu dhinaca bidix ee shaashaddaada
Dooro lacagta loo baahan yahay (haddii aad leedahay laba ama in ka badan koontooyinka lacagta)
Dhagsii tabta Tilmaamaha Maalgelinta
Xulo mid ka mid ah xisaabaadka la heli karo oo guji dusha.
Ku soo gal lambarkaaga sirta ah oo dooro lacagta loo baahan yahay (haddii aad leedahay laba ama in ka badan koontooyinka lacagta)
Faahfaahin noocee ah ayaan bixiyaa si aan u helo wareejinta imanaya koontadayda NEO?
Si aad lacag ugu hesho koontadaada NEO, waa inaad siisaa faahfaahinta akoonkaaga oo dhan bixiyaha.
Kuwaas waxaa laga heli karaa Xafiiska Macaamiisha ee NEO:
- Saxeex ku soo gal koontadaada NEO ka dibna tag tag "Akoonnada" dhinaca bidix ee shaashaddaada
Dooro lacagta lagama maarmaanka ah (haddii aad leedahay laba ama in ka badan koontooyinka lacagta)
Dhagsii tabta Tilmaamaha Maalgelinta. Ka dib markaa mid ka dooro koontooyinka la heli karo oo guji. Faahfaahinta koontada, sida Lacagta, Bangiga, IBAN, SWIFT BIC, iyo Ka-faa'iideystaha Magaca ayaa la muujin doonaa.
- Ku soo gal lambarkaaga sirta ah oo xulo lacagta lagama maarmaanka ah (haddii aad leedahay laba ama in ka badan koontooyinka lacagta)
“Kudar lacag”. Ka dib markaa mid ka dooro koontooyinka la heli karo oo guji. Faahfaahinta koontada, sida Lacagta, Bangiga, IBAN, SWIFT BIC, iyo Ka-faa'iideystaha Magaca ayaa la muujin doonaa.
Sideen u furan karaa koonto lacag cusub?
Sideen u xidhi karaa koontada lacagta ee aanan isticmaalin?
Haddii aad jeclaan lahayd inaad xirto koontadaada, si fudud ula xiriir kooxdayada Taageerada Macaamiisha bancaneo@protonmail.ch ka imaylkaaga diiwaangashan, oo codso inaad bilowdo nidaamka xidhitaanka akoontiga.
Fadlan maskaxda ku hay in khidmado dheeri ah lagu dabaqi karo.
Waad arki kartaa qorshooyinka canshuuraha halkan.
Sideen dib ugu howlgalin karaa koontadayda xiran?
Nasiib darrose, suurtagal ma ahan in dib loo howlgeliyo koonto la xiray. Haddii aad rabto inaad mar labaad isticmaasho adeegyadeena, fadlan dib u codso adoo soo gudbinaya foomka dalabka koontada shaqsiyeed ama ganacsi.
Sideen lacag ugu dhigi karaa koontadayda NEO?
Ikhtiyaarka kaliya ee hadda la heli karo ee lagu maalgelin karo koontadaada waa wareejinta bangiga.
Waxaad ka heli kartaa tilmaamaha maalgelinta koontadaada adoo qaadaya tallaabooyinka soo socda:
Fiiro gaar ah: Haddii aad ka wareejineyso koontada kale ee bangiga Yurub ee la aqoonsan yahay ee loo yaqaan 'SEPA' ee loo yaqaan 'Account'kaaga NEO ee EUR, waa inaad hubisaa inaad sameyneyso wareejin SEPA ah si looga fogaado wixii lacag dheeraad ah ee bangigaagu kaa qaado.
Lacagta waxaa laguugu shubayaa koontadaada Satchel gudaheeda 1-3 maalmood oo shaqo gudahood.
Sideen lacag ugu dhigi karaa koontadayda NEO adoo adeegsanaya kaarka amaahda / deynta?
Nasiib darrose, doorashadan lama heli karo xilligan.
Sideen u badali karaa lambarka taleefankayga, cinwaanka iimaylka, cinwaanka diiwaangelinta ama macluumaadka kale ee shaqsiyadeed?
Si aad u bedesho faahfaahinta xiriirkaaga ama macluumaadkaaga shaqsi / ganacsi, fadlan la xiriir kooxdayada Taageerada Macaamiisha bancaneo@protonmail.ch
Sideen ku heli karaa qoraal bangi?
Waxaan hadda ka shaqeyneynaa hirgelinta muuqaalkan boggeena internetka ee bangiyada si aad si dhakhso leh oo fudud ugu hesho faahfaahinta bangiyadaada.
Ilaa inta laga helayo, waxaad ku heli kartaa bayaan xisaabeed adigoo la xiriiraya kooxdayada Taageerada Macaamiisha bancaneo@protonmail.ch, oo muujinaysa xilliga lagama maarmaanka ah iyo qaabka la door biday ee bayaanka ku jira iimaylka.
Sideen ku soo gudbiyaa cabasho?
Cabashada waxaa lagu gudbin karaa seddex wadiiqo:
1. Boosta diiwaangashan ayaa loo diray cinwaanka xafiiska MM BITINVEST OU, Naituse tn 3, Tartu , 50409, Estonia;
2. Emayl bancaneo@protonmail.ch;
3. Foomka internetka halkan
Waxaan soo dhaweyneynaa jawaab celin kasta oo wax ku ool ah oo ka timaadda macaamiisheenna, waxaana si naxariis leh kaaga codsaneynaa inaad bixiso sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan arrinta / dhibaatooyinka aad la kulantid Tani waxay naga caawin doontaa inaan tallaabo ku habboon isla markiiba qaadno.
Soo gal iyo Password
Sideen uga galaa bangigayga dijitaalka ah?
Waxaad si fudud ugu heli kartaa koontadaada bangiga dijitaalka ah adiga oo gujinaya badhanka Soo galida ee ku yaal barta baaritaanka ee bogga Hore
Si aad u gasho, fadlan isticmaal cinwaanka e-maylkaaga la oggolaaday iyo lambarka sirta ah ee aad ku samaysay koontadaada.
Sideen u badali karaa lambarkayga sirta ah?
Si dib loogu dhigo lambarkaaga sirta ah, fadlan la xiriir kooxdayada Taageerada Macmiilka ee info@vn0.9ce.myftpupload.com
Sideen wax uga beddeli karaa e-maylka aan ku soo galo.
Si aad u bedesho faahfaahinta xiriirkaaga, fadlan u soo dir foomka beddelka faahfaahinta Xiriirka oo buuxa oo ah (iskuxirka foomka) kooxdayada Taageerada Macaamiisha ee info@vn0.9ce.myftpupload.com
Ma jiri karaan dhowr isticmaale koontadayda ganacsi?
Haa, waxaa jira suurtagal in lagu daro isticmaale dheeri ah koontadaada ganacsiga.
Fadlan la xiriir kooxdayada Taageerada Macaamiisha ee info@vn0.9ce.myftpupload.com caawimaad.
Waa maxay 2FA (Labo-Xaqiijin Aqoonsi)?
Marka aan nahay NEO waxaan hiigsaneynaa khibrad isticmaale oo hagaagsan, anagoo ilaalinayna heerarka amniga sare. Tani waa sababta aan u haysanno Xaqiijinta Laba-shey (2FA) oo loogu talagalay koontadaada NEO, oo ku dareysa lakab ammaan oo dheeri ah oo ka ilaaliya koontadaada marin-u-helidda aan la oggolaan oo lacagtaada ka dhigaysa mid ammaan ah mar walba.
2FA waxaa lagaa rabaa inaad geliso labadaba eraygaaga sirta ah iyo OTP (Hal-jeer Password) oo laguusoo diro adiga markasta oo aad gasho koontadaada NEO, iyo waliba wakhti kasta oo aad sameyneyso wareejin.
Tilmaamaha Isticmaalka Laba-Qodob (2FA)
Bixinta & Macaamilada
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in lacag laga soo diro koontadayda NEO?
Waqtiyada ka shaqeynta wareejinta wareejinta waxay kuxirantahay nooca wareejinta.
Wareejinta nidaamka gudaha waa deg deg. Wareejinta SEPA waxay qaadataa inta udhaxeysa 1-2 maalmood oo shaqo.
Wareejinta SWIFT waxay qaadataa inta udhaxeysa 3-5 maalmood oo shaqo.
Waxaan rabaa inaan ku diro / ku helo lacag wareejin lacag kale oo aan aheyn EUR, maxaan sameeyaa?
Xawilaadaha caalamiga ah ee ka baxaya / soo galaya ee lacagaha kale ee aan ahayn EUR waxaa laga heli karaa oo keliya adeegyadeena la wadaago ee IBAN.
Ma helin wareejin cadadkeedu dhan yahay. Lacago dheeri ah miyaa lagaa qaaday?
Wax lacag ah kaama qaadi doonno markaad lacag dhigato koontadaada NEO iyada oo loo marayo xawilaadda bangiga.
Si kastaba ha noqotee, marka la sameynayo lacag bixin caalami ah, soo diraha ayaa dooran kara kooxda dabooleysa khidmadaha wareejinta ee baxaya.
Intaa waxaa sii dheer, markii aad heleyso wareejinta SWIFT, baafiyaha (dhexdhexaadiye) bangiga ayaa laga yaabaa inuu ka jaro khidmadaha wax-qabadka, sidaas darteedna qadar yar ayaa laguugu dari karaa xisaabtaada.
Ma helin wareejin soo socota. Maxaan sameeyaa
Haddii wareejin laguu soo diray aan lagu xisaabin koontadaada, waa inaad ka heshaa xaqiijinta lacag bixiyaha oo aad ugu dirtaa kooxdayada taageerada info@vn0.9ce.myftpupload.com
Waxaan u wareejiyay IBAN qaldan. Maxaan sameeyaa
Haddii aad ku wareejisay IBAN qaldan, fadlan isla markiiba ogeysii kooxdayada taageerada bancaneo@protonmail.ch oo weydii inay bilaabaan dib u yeedhis lacag bixin ah.
Fadlan ogow, in haddii wareejinta horeyba loogu qaddaray koontada qaataha, ma awoodi doonno inaan ka beddelno macaamilka. Xaaladdan oo kale, waxaan kugula talin lahayn inaad la xiriirto qaataha si toos ah adigoo weydiisanaya dib u noqosho.
Sideen ugu wareejin karaa koonto kale oo NEO ah?
Si aad u sameyso wareejin gudaha ah, waxaad u baahan doontaa oo keliya lambarka koontada gaaban ee qaataha.
Xulo nooca lacag bixinta "Gudbinta Gudaha" ee xafiiska macmiilkaaga, geli lambarka koontada, nidaamkuna si otomaatig ah ayuu u baari doonaa keydka macluumaadka. Waxa kaliya ee haray waa in la qoro qadarka macaamilka. Wareejinta isla markiiba waa la fulin doonaa.
Sideen u dalban karaa kaarka lacag bixinta?
Waad raaci kartaa xiriirkan illaa dalbo kaarka lacag bixinta, kaas oo ku xirnaan doona koontadaada NEO.
Ogsoonow: Waxaad dalban kartaa oo keliya Mastercard-ka lacag-bixinta ah haddii aad akoon xaadir ah ku leedahay NEO.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Bixiyaha Joogtada ah iyo canshuuraha Firfircoon ee Firfircoon?
Farqiga u dhexeeyaa waa xadka kaararka iyo khidmadaha. Canshuurta Kharashaadka Firfircoon ee Firfircoon waxay u oggolaaneysaa xaddidan sare oo leh khidmado hoose.
Ma ka casriyayn karaa khidmadayda kharashka joogtada ah ee loo yaqaan 'Spender Firfircoon'?
Haa, iyada oo loo marayo taageerada wada hadalka.
Goorma ayaa kaarkayga la geynayaa?
Ka dib markii amarkaaga la dhigo, oo lagu siiyo waxaad haysataa lacag kugu filan oo aad ku daboosho khidmadaha rarka, kaarka sida caadiga ah waxaa lagu soo diri doonaa maalinta shaqada ee xigta.
Waqtiga gaarsiinta caadiga ahi waa illaa 20 maalmood oo shaqo.
Gaarsiinta degdegga ah ee dalalka Midowga Yurub iyo Boqortooyada Midowday waa inaysan ka badnaan 3 maalmood oo shaqo.
Gaarsiinta degdega ah ee wadamada kale waa inay qaadataa ilaa 5 maalmood oo shaqo.
Immisa kaar ayaan ku heli karaa koontadayda NEO?
Xisaab shaqsiyeed: 1 kaar balaastik ah oo akoonka haysta iyo 2 kaar oo kumbuyuutar ah koontadiiba.
Xisaab ganacsi: ugu badnaan 5 kaar (dalwad ah ama caag ah) ilaa 5 kaar haystayaal akoon ganacsi oo keliya.
Waa maxay lacagta kaarkayga NEO la soo saari karo?
Waqtigan xaadirka ah kaararka waxaa lagu soo saaray EUR.
Sideen u hawl gelin karaa kaarkayga?
Waxaad si toos ah uga samayn kartaa goobaha kaarka ee xafiiska Macaamilkaaga. Markaa waa inaad ku sii wadataa kor-u-qaadista dheelitirka kaarkaaga.
Dhammaan shaqooyinka kaarka ayaa la shaqeeyn doonaa isla marka aad macaamilkaaga ugu horreeya ka sameyso ATM ama POS.
Sideen ku buuxin karaa kaarkayga NEO?
Xulo qaybta Kaararka ee xafiiska macmiilkaaga, dooro kaarka aad ugu baahan tahay kor-u-qaadista, geli qaddarka iyo sheekada, haddii loo baahdo, oo ku ansixi macaamilka lambarkaaga.
Macaamilku wuxuu isla markaaba ka turjumayaa dheelitirka kaarkaaga.
Halkeen ka heli karaa kaarkayga PIN?
Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa goobaha kaarka. Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho, waxaad ku samayn kartaa sheekeysi.
Kaarkayga NEO ma leeyahay aaladda aan lala xiriirin karin?
Haa, dhammaan kaararka NEO lama xiriirin.
Waa maxay xadka hadda socda ee lacag la'aanta xiriirka la leh?
Xadka waxaa dejiyay bangiga ganacsadaha, oo uu hagayo Nidaamka Lacag Bixinta Adduunka. Badanaa xadka waa inta udhaxeysa 25-50 EUR.
Waa maxay 3D Secure? Miyuu karti u leeyahay kaarkayga?
3D Secure waa muuqaal loogu talagalay inay noqoto lakab amni oo dheeri ah oo loogu talagalay macaamilada kaararka e-commerce.
Dhammaan kaararka NEO waxaa lagu qalabeeyaa 3D Secure.
Ma jiraan wax xaddidan oo kaar ah?
Waad hubin kartaa xadka kaarka NEO HALKAN.
Si kor loogu qaado xadka kaarkaaga, fadlan nagala soo xiriir chat ama atinfo@vn0.9ce.myftpupload.com
Miyaan lacag kala bixi karaa kaarkayga NEO ee ATM-ka?
Lacag waad kala bixi kartaa kaarkaaga NEO ee AMT kasta oo taageera Mastercard. Fadlan ogow inay jiraan LINK
Ma ku bixin karaa khadka tooska ah kaarkayga NEO?
Haa, waxaad ku bixin kartaa khadka tooska ah kaarkaaga NEO.
Fadlan hubso in dheelitirka kaarka uu ka sarreeyo xaddiga macaamil ganacsi ee aad rabto inaad sameyso.
Waxaan waayey kaarkayga NEO. Maxaan sameeyaa
Haddii kaarkaagu kaa lumay, waa inaad isla markiiba ogeysiis ku siisaa kooxdayada Kaararka iyada oo loo marayo sheekeysi ama at info@vn0.9ce.myftpupload.com, oo ka codso inay kaa xiraan kaarkaaga. Kooxda ayaa kugu hagi doonta adiga talaabooyinka soo socda.
Kaadhkaygu wuu dhacayaa. Maxaan sameeyaa
Bil ka hor taariikhda dhicitaanka kaarkaaga waxaad heli doontaa ogeysiis ku saabsan beddelka kaarka.
Isla wargelinta waxaa lagaa codsan doonaa inaad muujiso cinwaankaaga keenista.
Ogsoonow: Fadlan maskaxda ku hay in markii aad hesho kaarkaaga cusub, ay tahay inaad ka hawlgeliso Xafiiska Macaamilka ee NEO ama barnaamijka moobiilka.
Ma xidhi karaa kaararka NEO ee ku xidhan koontada lacagta?
Haa. Si taas loo sameeyo, fadlan u soo dir su'aal kooxdayada Taageerada Macaamiisha adoo adeegsanaya wada sheekeysi ama at info@vn0.9ce.myftpupload.com.
Shirkad ma u soo saari kartaa kaararka shaqaalaheeda akoon ganacsi?
Haa. Wixii faahfaahin ah fadlan nala soo xiriir